हाम्रो एन्ड्रोइड फोनको लागि आधारभूत अनुप्रयोगहरू Androidsis
नयाँ एन्ड्रोइड फोन? त्यसोभए तपाईलाई यी अनुप्रयोगहरू चाहिन्छ
जब तपाईं नयाँ एन्ड्रोइड फोन खरीद गर्नुहुन्छ, अब समय छ यसमा सम्भव सबैलाई व्यक्तिगत गर्न। फोनलाई तपाईंको मनपर्ने कन्फिगर गर्नुहोस्, नयाँ ट्रिकहरू पत्ता लगाउनुहोस् र अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्नुहोस् जुन तपाईं आफ्नो फोनबाट अधिक प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जब यो समय आउँदछ, त्यहाँ केहि अनुप्रयोगहरू छन् जुन हामी आवश्यक विचार गर्न सक्छौं।
धेरै जसो एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूको फोनमा अनुप्रयोगहरू छन्, र तपाईलाई यो जान्न राम्रो लाग्छ। यो धेरै सम्भावना देखिन्छ कि तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो उपकरणमा प्रयोग गर्न लाग्नु भएको छ। त्यसोभए तपाईले फोनको फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईले खोज्नु भएको कुरा यसलाई व्यक्तिगतकरण गर्नु हो भने पक्कै हो यो लेख यो तपाइँको लागि ठूलो सहयोगी हो।
1 सन्देश र सामाजिक नेटवर्कहरू
5 कार्यालय स्वचालन
6 सुरक्षा र गोपनीयता
सन्देश र सामाजिक नेटवर्कहरू
हाम्रो Android फोनको साथ हामीले प्राय: गर्ने कामहरू मध्ये एक साथी र परिवारलाई सम्पर्क गर्नु हो। यस अर्थमा, हामी अनुप्रयोगहरूको श्रृंखला भेट्टाउँछौं जुन तपाईंलाई निश्चित रूपमा थाहा छ। सन्देश अनुप्रयोगहरूको चयन एकदम फराकिलो छयद्यपि त्यहाँ केहि बाहिर छन् जो बाँकी भन्दा माथि उभिएका छन्: व्हाट्सएप, टेलिग्राम र फेसबुक मेसेन्जर आज यस सम्बन्धमा सबैभन्दा लोकप्रिय छन्। यद्यपि तपाईं सक्नुहुन्छ यो लिंकमा धेरै अधिक पत्ता लगाउनुहोस्.
सन्देश अनुप्रयोगको साथसाथै, एन्ड्रोइडमा हामी सामाजिक नेटवर्कहरू पनि पाउँछौं। अपरेटि system प्रणालीको प्रयोगकर्ताहरूका बीच ठूलो लोकप्रियताको मजा लिने अनुप्रयोगहरूको अर्को कोटी, र ती मध्ये धेरैले नियमित प्रयोग गर्दछन्। फेरि, हामी यस सम्बन्धमा तीन अनुप्रयोगहरू फेला पार्दछौं।
केहि चीज जुन तपाई निश्चित रूपमा तपाईको एन्ड्रोइड फोनका साथ गर्नुहुन्छ, वा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, संगीत सुन्नुहोस्। हाल यस सम्बन्धमा सब भन्दा साधारण तरीका भनेको स्ट्रिमिंग संगीत सुन्नु हो, धेरै अनुप्रयोगहरू जुन यो क्षेत्रमा देखा पर्दछ। हामीसँग धेरै छ संगीत खेलाडीहरू आज उपलब्ध, जसले यस कार्यलाई सजिलो बनाउँदछ। जे होस् यदि तपाइँ स्ट्रिमिंगमा शर्त लगाउनुहुन्छ, Spotify यस सन्दर्भमा ठूलो विजेता हो, तर केवल एक होईन।
Deezer - संगीत र पोडकास्ट
हामी हाम्रो एन्ड्रोइड फोनलाई धेरै प्रयोगहरू दिन सक्छौं। त्यसकारण, सबै कुरा राम्रोसँग व्यवस्थित गर्नु यस सम्बन्धमा आवश्यक छ। यसैले हामी नोट / रिमाइन्डर अनुप्रयोगमा बदल्यौं, जसको साथ हाम्रो कार्य वा गतिविधिहरू व्यवस्थित गर्न सक्षम हुनुहोस् कसरी शपिंग गर्ने। यो एक धेरै सहज विकल्प हो, र यस फाँटमा अनुप्रयोगहरूको चयन एकदम फराकिलो छ.
यदि तपाईं आफ्नो फोनमा राम्रो डिजाइन र राम्रो एकीकरणको साथ नोट अनुप्रयोग खोज्दै हुनुहुन्छ भने, सबै भन्दा राम्रो विकल्प गुगल किप हो। हामीसँग टास्क अनुप्रयोगहरू छन्, जस्तै टास्कर, जुन हामीलाई उपयोगी हुन सक्छ। नोट अनुप्रयोगहरूको क्षेत्रमा, अर्को अत्यधिक मूल्यवान् विकल्प Evernote हो।
मूल्य: ११.०3,59 €
तपाईंलाई अहिले नै थाहा भइसकेको छ, अनुप्रयोगहरूको चयन जुन हामीले प्ले स्टोरमा फेला पार्‍यौं विशाल छ। जबकि त्यहाँ सँधै केहि उपकरणहरू छन् जसले हामीलाई अझ राम्रोसँग काम गर्न अनुमति दिन्छ वा त्यो धेरै विशिष्ट अवस्थाहरूमा उपयोगी हुन सक्छ। हामी समय, अन्यको अनुप्रयोगहरू सन्दर्भ गर्दछौं अनुवादकको रूपमा o फाइल अन्वेषक। अनुप्रयोगहरू जुन हामी धेरै जसो अवस्थामा प्रयोग गर्ने छौं, र यो हाम्रो एन्ड्रोइड फोनमा हुनु लायक छ।
विकासकर्ता: बाचा नरम
कागजातहरू पढ्नको लागि तपाईं आफ्नो एन्ड्रोइड फोन प्रयोग गरिरहनु भएको छ, चाहे ती वर्ड वा पीडीएफ स्वरूपहरू हुन्। यस अर्थमा, तपाईंलाई अनुप्रयोगहरू चाहिन्छ जुन फोनमा यी प्रकारका फाईलहरू खोल्नको लागि। हामीले पहिले पनि तपाईंसँग कुरा गरिसकेका छौं यी अफिसको स्वचालन अनुप्रयोगहरू जुन अहिले प्ले स्टोरमा उपलब्ध छन्। जे होस् यदि तपाईं ठाउँ बचत गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ एक राम्रो विकल्प छ जुन WPS Office हो किनभने हामी सबै अनुप्रयोगमा डाउनलोड गर्छौं।
त्यसोभए हामीसँग सबै कुराको पहुँच हुनेछ। हामी यससँग कागजातहरू वा PDF फाईलहरू खोल्न सक्दछौं, साथ साथै एक्सेलको साथ टेबुलहरू पनि। धेरै पूर्ण र सबै एकै प्याकमा केन्द्रित, जुन नि: शुल्क पनि छ।
यो एकदम फराकिलो क्षेत्र हो, तर हामीले हाम्रो Android फोनको सुरक्षालाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्छ। आज धेरै खतराहरू छन्, त्यसैले केहि सुरक्षा अनुप्रयोग उपयोगी हुन सक्छ। यस अर्थमा हामी अनुप्रयोगहरू सन्दर्भ गर्छौं जसले हामीलाई यसको सुरक्षा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ, जस्तो कि हामीले यस समयमा तपाईंलाई पहिल्यै भनिसकेका छौं। त्यो सूचीमा रहेको अनुप्रयोगहरू एन्टिभाइरसदेखि पासवर्ड प्रबन्धकहरूमा पर्दछन्।
पासवर्ड व्यवस्थापकहरू, जसको बारेमा तपाईं यहाँ अधिक जान्न सक्नुहुन्छ, आज आवश्यक छ, हाम्रो खाताहरू वा हाम्रो आफ्नो फोनमा पहुँच सुरक्षित गर्न। भाग्यवस, चयन एकदम फराकिलो छ, र त्यहाँ उत्कृष्ट गुणवत्ता विकल्पहरू छन् उहीमा। सम्भवतः यस फाँटमा सबैभन्दा प्रख्यात विकल्प लास्टपास हो, जुन एन्ड्रोइड ब्रह्माण्डमा प्रयोगकर्ताहरूको समर्थन छ।
न त हामी बिर्सन सक्छौं गुगल अनुप्रयोगले मेरो उपकरण फेला पार्‍यो। यसको लागि धन्यबाद हामी हाम्रो हराएको वा चोरी भएको Android फोन पुन: प्राप्ति गर्न सक्षम हुनेछौं, गुगल खातासँग सिnch्ख्रोनाइज भएको हुनाले हामी यसलाई कम्प्युटरबाट पहुँच गर्न सक्दछौं, केहि चीज जुन हामीले तपाईंलाई पहिले देखाइसकेका छौं। विचार गर्न अर्को राम्रो अनुप्रयोग।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू » नयाँ एन्ड्रोइड फोन? त्यसोभए तपाईलाई यी अनुप्रयोगहरू चाहिन्छ
तपाइँ अनुप्रयोगको नयाँ प्रकार्यको साथ इन्स्टाग्राममा बिताउनु भएको समय कसरी जान्ने